Iindaba - Uyikhetha njani ibhrashi yamazinyo yabantwana
Uninzi lwabazali luza kuhlakulela umkhwa wabantwana babo wokuhlamba amazinyo ukususela ebuntwaneni, ke xa abantwana kufuneka bewahlambe ngcono amazinyo abo? Loluphi uhlobo lwebrashi yamazinyo ekufuneka ndiyikhethile? Ngawaphi amanyathelo okhuseleko xa ukhetha ibrashi yamazinyo yabantwana? Masabelane namhlanje: Uyikhetha njani ibrashi yamazinyo yabantwana
Makhe sijonge ixesha xa umntwana eqala ukuxubha. Xa umntwana emalunga neminyaka emi-2 ubudala, amazinyo aphezulu kunye asezantsi made. Ngeli xesha, umama onononophelo kufuneka ahlakulele imikhwa yokuxubha yomntwana kwaye athengele efanelekileyo umntwana. Ibrashi yamazinyo ngaphandle.
Xa ukhetha ibrashi yamazinyo yabantwana, into yokuqala ekufuneka uyijongile kukuthamba kweebristles zebrashi yamazinyo. Ibhrashi yamazinyo yomntwana kufuneka yenziwe ithambe kangangoko kunokwenzeka. Sukusebenzisa ii-bristles eziphakathi kunye nezinzima. Ukuqaqamba okuphakathi kunye nobunzima kuya konakalisa ukuthamba komntwana. Iintsini.
Ukongeza, jonga ukuba incam yebhrashi yamazinyo yabantwana ekhethelwe umntwana wakho incinci, ayindanga kakhulu, ububanzi akubalulekanga kangako ukujikeleza emlonyeni womntwana ukuba mncinci kakhulu, kwaye incam encinci inokuba nkulu Ukuxukuxa.
Kukho ingxaki yesiphatho. Kuba isandla esincinci somntwana sincinci, sukukhetha isiphatho esincinci kakhulu, kodwa isibambo esijiyana kancinci, esiya kumnceda umntwana ukuba abambe xa uhlamba amazinyo. Xa uthenga ibhrashi yamazinyo, qiniseka ukuba uzise umntwana wakho ukuba abhekiswe kuye.
Emva koko kukho ixesha lokutshintshwa kweebrashi zamazinyo zabantwana. Kuyacetyiswa ukuba ubeke endaweni yazo rhoqo emva kweenyanga ezi-3-4, endaweni yokulinda de ibrashi yamazinyo igobe okanye iwe. Ewe, ukuba ibrashi yamazinyo igobile okanye iyawa zingaphelanga iinyanga ezintathu, emva koko yitshintshe kwangoko.